गोप्य अंग ताक्दै ट्याटु, गोप्य अंगका ट्याटु सेक्सी – MeroJilla.com
गोप्य अंग ताक्दै ट्याटु, गोप्य अंगका ट्याटु सेक्सी
काठमाडौं, वसन्तपुरको काठमाडौं इन ट्याटु हाउसमा थोरै मुस्कुराउँदै छिरिन् ।
ट्याटुकारले सोधे, ‘कहाँ हान्ने?’
अलिकति लज्जाभावसहित उनले आफ्नो हात छातीतिर औँल्याइन् र भनिन्, ‘यहाँ अलरेडी ट्याटु छ, त्यसलाई अर्को ट्याटुले छोप्नुपर्यो ।’
किन छोप्न लागेको ? रिपोर्टिङका क्रममा रहेको संवाददाताले जिज्ञासा राख्यो । उनले हाँसीहाँसी जवाफ फर्काइन्, ‘यहाँ ब्वाइफ्रेन्डको नाम छ । ऊसँग ब्रेकअप भयो, उसले अर्कै केटीसँग बिहे ग¥यो । त्यसैले छोप्न ला’को ।’
प्रेमीप्रति आफ्नो बलियो प्रेम दर्शाउनका लागि उनले ‘मुुटु’माथि उसको नाम लेखेकी रहिछन् । ‘त्यतिबेला बुद्धि पुगेन, राम्र्रै होला भन्ने सोचियो तर सोचेजस्तो हुन्न रहेछ लाइफ,’ उनको बोली र मुहारले पुछुतो भाव प्रस्ट पारिरहेको थियो । त्यसपछि ट्याटुकारले आधा घण्टा लगाएर उनको ट्याटुमाथि पाण्डाको ‘आकृति’ खोपिदिए । आइटी व्यवसायमा संलग्न रहको बताउने उनी एकजना महिला साथीसहित त्यहाँ आएकी थिइन् ।
नेपालमा ट्याटु खोप्ने प्रचलन पुरानो भइसक्यो । तैपनि एउटा समय थियो जतिबेला शरीरका देखिने अंगहरुमा ‘ट्याटु’ खोपाउनेहरु नै विरलै भेटिन्थे । तर, समय अहिले धेरै ‘एडभान्स’ भइसक्यो । शरीरका गोप्य तथा संवेदनशील अंग अर्थात् त्यसको छेउछाउमा ट्याटु खोपाउने ‘ट्रेन्ड’ अहिले बढ्दै गइरहेको छ । कतिपयका लागि ट्याटु खोपाउनु फेसन हो भने कतिपय यसलाई ‘मर्दा आफूसँगै लाने एकमात्र सुन्दर चिज’का रुपमा वर्णन गर्छन् । ट्याटु मान्छेको भावना अभिव्यक्ति गर्ने माध्यम पनि बनिरहेको छ ।
यतिबेला सहर–बजारमा मान्छेका हात, पाखुरा, घाँटी लगायतका अंगमा खोपिएको ट्याटु त धेरै देखिन्छन् तर सँगसँगै शरीरका कम्मर, नितम्ब, पिठ्यु“, छाती, तिघ्रा, पेट आदि ठाउँमा ट्याटु खोपाउने पुस्ता पनि उत्तिकै भेटिन्छन् । ‘अहिले ट्याटु खोपाउने मामिलामा महिला–पुरुषको संख्या बराबर छ, अझ गोटाका हिसाबले स–साना भए पनि केटीले बढी खोप्दा हुन्,’ ठमेलको व्यस्त ट्याटु हाउस मोहन्स ट्याटुका ट्याटुकार श्री किसी भन्छन्, ‘ट्याटु भनेको छाला जहाँ–जहाँ हुन्छ त्यहाँ खोप्न मिल्छ । कसैले देखिने ठाउँमा खोप्छन्, कसैले नदेखिने । त्यो मान्छेको रुचिमा भर पर्छ । खासगरी युवतीहरुले गोप्य ठाउँमा खोपाउने गर्छन् ।’ विदेशमा १८ वर्È पुगेपछि मात्रै ट्याटु खोपाउन पाइन्छ तर नेपालमा भने १६ वर्षमाथिका लागि खोपाउने गरेको पाइन्छ ।
गोप्य ठाउँमा किन ?
मान्छेले ‘ट्याटु’ किन खोप्छ ? धेरैलाई लाग्दो हो– ‘सो अप’ अर्थात् देखाउनका लागि । देखाउनकै लागि हो भने मान्छेले झट्ट हेर्दा नदेखिने ठाउँमा किन खोप्छ त ? अर्थात्, किन गोप्य अंग नै रोज्छ ? मनोविद् करुणा कुँवर भन्छिन्, ‘शरीरको देखिने÷नदेखिने जस्तो ठाउँमा ट्याटु खोप्नेको पनि मनोभावना त आफ्नो पहिचानलाई चित्रित गर्ने नै हुन्छ । कतिपयले सबैले देख्नेगरी चित्रित गर्छन्, कसैले सबैलाई देखाउन चाहँदैनन् । कतिपयले खुल्ला पहिरन लगाउँदा मात्र देखिने गरी ट्याटुु खोपेर आफ्नो यौनिकतालाई चित्रित गर्न खोजिरहेको पनि हुनसक्छ ।’ उनलाई यस्तो पनि लाग्छ– गोप्य ठाउँमा ट्याटु खापाउने महिलाहरुले आफूलाई ‘सेक्सी’ र ‘सुन्दरी’ छु भनेर आत्मविश्वास प्रमाणित गर्न खोजिरहेका पनि हुन्छन् ।
काठमाडौं, चावहिल बस्ने सलिना लामा (नाम परिवर्तन)ले यौनाङ्गकोको छेउमा ‘बटरफ्लाई’को ट्याटु खोपाएकी छन् । किन त ? ‘हुनेवाला श्रीमानलाई सरप्राइज दिन,’ उनले हाँसीहाँसी कारण दिइन् । शरीरका पाँच ठाउँ ट्याटु खोपाएको बताउने उनले थप बोल्न चाहिनन् ।
शरीरको गोप्य स्थानमा ट्याटु खोप्नेहरुले पनि ‘ट्याटु’लाई सधैँ गोप्य राखिरहन चाहँदैनन् । ललितपुर, सातदोबाटोमा डान्स सेन्टर चलाइरहेकी मेघना मगरले शरीरका तीन ठाउँमा ट्याटु खोपेकी छन् । ‘कुममा खोपेको ९ वर्ष भयो, हिपमा ४ वर्ष र खुट्टामा तीन वर्ष,’ उनलाई ट्याटु खोपेको समय स्पष्ट याद छ । ‘हिपमा पाठेघर, कुममा जापानी गुलाफ र खुट्टामा मेरै डान्स सेन्टरको लोगो खोपेकी छु,’ उनले सुनाइन्, ‘मैले चाहेको बेला मात्र देखियोस् भनेर नदेखिने ठाउँमा खोपेकी हुँ । सधैँ देखियो भने त ‘भ्यालू’ पनि हुँदैन नि ! देखिँदा पनि हल्का देखियोस्, देख्नेलाई पनि यसको शरीरमा ट्याटु रहेछ तर के रहेछ भन्ने कौतहुलता होस् न भन्ने लाग्छ ।’ आफूले खोपेको प्रत्येक चित्रको अर्थ रहेको बताउने उनले मान्छेको ध्यान आफूतिर खिँच्न नै ट्याटु खोपाएको बताइन् । ‘अब छातीको अगाडि अर्थात् बेली एप्समा खोप्ने चाहना छ, चाँडै खोपाउँछु,’ उनले ट्याटु योजना सुनाइन् ।
काठमाडौं, सामाखुसीकी रेणु पौडेल (नाम परिवर्तन)ले आफ्नो स्तनमा ‘लभ’ लेखिएको ट्याटु खोपाएकी छन् । ‘खोप्न त हातमा मन थियो तर घरमा ट्याटु खोपेको मन पराउँदैनन्, त्यसैले यहाँ (स्तन) खोपेकी हुँ,’ उनले बताइन् । करिब १४ वर्षदेखि ट्याटु खोप्न थालेका काठमाडौं, ठमेलका स्वस्तिक ट्याटुका ट्याटुकार सञ्जय खड्गी घरबाट अनुमति नमिल्ने भएकाले धेरै युवतीले नदेख्ने ठाउँमा खोपाउने गरेको बताए । ‘त्यसरी ट्याटु खोपाउनेहरुको चाहना कमसेकम साथीहरु माझमा पुग्दा देखाउन पाइयोस् भन्ने हुन्छ, कोही आफ्नो स्पेसल मान्छेले मात्र देखोस् भन्ने चाहना राखेर पनि खोप्छन् होला,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए ।
ट्याटु त आकर्षक देखाउनका लागि खोपिनुपर्ने हो तर युवतीहरुले किन छोपिने गरी हान्छन् ? धरानका व्यस्त ट्याटु आर्टिस्ट विमल राई भन्छन्, ‘डरले वा संकोचले पनि हुनसक्छ वा जसलाई देखाउनुपर्ने हो उसैलाई मात्र देखाउनको लागि पनि हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार पूर्वतिर युवतीहरुले तिघ्रा, पाखुरा, पिँडुला, स्तनदेखि योनि छेउछाउका भागतिर ट्याटु खोप्ने गरेका छन् ।
‘केही लेडिजहरु अरुको देखासिकीमा भल्गर देखिने गरी टाटु खोप्न पनि आउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तालाई सम्झाएर पठाउने गर्छु ।’
कस्तो डिजाइन बढी ?
शरीरका गोप्य ठाउँमा बढी कस्ता डिजाइनमा ट्याटु खोपाउँछन् ? ‘छातितिर आफ्ना छोराछोरी, इष्ट देवदेवीको नाम र अनौठा भनाइहरु खोपाउनेहरू पनि छन्,’ स्वस्तिक ट्याटुका खड्गीले भने, ‘कतिपयले प्रेमी र प्रेमिकाको नाम खोपाउँछन् भने त्यसबाहेक राष्ट्रिय झण्डा, फूल, अजिङ्गर, कङ्काल आदिको ट्याटु बढी खोपाउँछन् ।’
पोखराका व्यस्त ट्याटुकार विक्रमकुमार जुर्वाचनका अनुसार त्यहाँ धेरैजसो नदेखिने ठाउँतिर पुतली, ड्र्यागन, माछा लगायतका चित्र खोपाउँछन् ।
यता ठमेलस्थित मोहन्स ट्याटुका ट्याटुकार श्री किसीको भने ‘ठोस डिजाइन’ नहुने बताउँछन् । ‘ठ्याक्कै यस्तै हान्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अधिकांशले आफैँ कन्सेप्ट र डिजाइन लिएर आउने गर्छन् । उनीहरुकै कन्सेप्टअनुसार हामीले काम गर्ने गर्छौं ।’
त्यस्तै पाका उमेरका विदेशीहरु नेपाल आएको सम्झ्नालाई चिरस्थायी बनाउन प्राकृतिक दृश्यस“गै बुद्ध, शिव, सरस्वती आदिको आकृति बनाउन रुचाउँछन् । जसलाई ‘ओरिएन्टल ट्याटु’ भनिन्छ ।
नेपालमा ट्याटु खोपाउनेहरु नेपाली मात्र छैनन्, विदेशी पनि उत्तिकै छन् । ‘कतिपय विदेशीले नेपालमा धेरै सस्तो पर्ने भएकाले यहाँ खोपाएर जान्छन् भने कतिपयले नेपालको सम्झना बोकेर लाने उद्देश्यले खोपाउँछन्,’ स्वस्तिक ट्याटुका सञ्जय खड्गीले बताए । उनले डिजाइन र घण्टाअनुसार मूल्य लिने गरेको बताए । ‘ट्याटुको डिजाइन हेरेर घण्टाको २५ सयदेखि तीन हजारसम्म लिन्छौं,’ उनले भने ।
रोचक त के छ भने कतिपयले विदेशीले ट्याटुको बाजी पनि खेल्ने गरेका छन् । यस्तो अनुभव ट्याटुकार श्री किसीले गरेका रहेछन् । भन्दै थिए, ‘कतिपय विदशीले ट्याटुको बाजी हान्या हुँदारहेछन् । जसले हार्छ उसले जित्नेले भनेको ठाउँमा ट्याटु खोपाउने बाजी खेल्छन् । त्यहीअनुसार ट्याटु हान्न आउँछन् । कतिपयले त्यसरी बाजी हारेर गोप्य भागतिर ट्याटु हानेका पनि छन् ।’
अफेयरमा खोपाउने, ब्रेकअपपछि छोप्ने
पछिल्लो समय आफ्नो शरीरको अंगमा प्रेमी र प्रेमिकाको नाम खोपेर दङ्ग पर्ने युवा÷युवतीको जमात ठूलो छ । प्रेममा रहेका बेला त्यसरी नाम खोपाउनेहरुले पछि ब्रेकअप भएपछि पुनः ‘कभरअप’ गर्ने गरी नयाँ ट्याटु बनाउने गर्छन् । शुक्रबारकर्मीले भेटेका अधिकांश ट्याटुकारले युवायुवतीमा यो समस्या रहेको बताए । ‘त्यसैले म अन्डर एट्टिनका केटाकेटीलाई ट्याटु नहानोस् भन्ने चाहन्छु,’ मोहन्स ट्याटुका श्री किसीले भने, ‘उनीहरुमा युवा जोश हुन्छ, दिमाग पनि परिपक्व भइसकेको हुँदैन । त्यसैले गहिरो लभमा परेको बेला ‘नाम हान्दिउँ न त’ भनेर हान्दिन्छन् अनि पछि पछुताउँछन् । अचम्म त के छ भने मकहाँ आउने अधिकांश युवायुवती त अफेयरमा नाम खोपाउने भन्दा पनि ब्रेकअप भएपछि छोपाउनेहरु पर्छन् ।’
पोखरामा पनि त्यस्तै समस्या रहेको ट्याटुकार विक्रमकुमारले बताए । ‘बिहेअघि नाम खोपाउन आउनेलाई त म नखोप्न नै सुझाव दिन्छु,’ उनले भने ।
मनोविद् करुणा कुवँर भन्छिन्, ‘प्रेममा असुरक्षा महसुस भएपछि भित्रैबाट आत्मविश्वासको विकास गर्न युवायुवतीले एकअर्काका नाममा ट्याटु खोपाउने गर्छन् । कोही केटीलाई केटा एकदमै मनपरेको छ तर उसले छाडेर जाला कि भन्ने डर मनमा छ भने उसले प्रेममा आत्मविश्वास बढाउन र आफ्नो प्रेमीलाई तिम्रालागि केसम्म गर्न सक्छु भनेर प्रमाणित गर्न उसको नामको ट्याटु खोपाउने गर्छन् ।’
प्रेमीकै अगाडि ट्याटु
गोप्य भागमा ट्याटु खोपाउँदा थुप्रै युवतीहरुले आफ्नो प्रेमीलाई पनि सँगै लाने गर्छन् । स्तनमा फूलको ट्याटु खोपाएकी ठमेलको एक डान्स बारमा कार्यरत सम्झना लिम्बु (नाम परिवर्तन)ले आफूले ब्वाइफ्रेन्डकै अगाडि ट्याटुु खोपेको बताइन् । ‘ब्वाइफ्रेन्ड साथमा हुँदा सेफ फिल हुन्छ र ब्वाइफ्रेन्डले पनि नराम्रो सोच्दैन भनेर लगेकी थिएँ,’ उनले सुनाइन् ।
घरमै जान्छन् ट्याटुकार
काठमाडौं, लाजिम्पाटको एक डान्सबारमा कार्यरत नुवाकोटकी डान्सर वर्षा लामाले पाँच महिनाअघि ढाडको माथिल्लो र मुनि दुवै भागमा ट्याटुु खोपाएकी छन् । ‘सुरुमा ट्याटु भन्नेबित्तिकै हेट लाग्थ्यो, पछि मसँगै काम गर्ने एकजना दिदीको ट्याटु देखेर मलाई पनि खोप्न मन लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘एकजना चिनेको दिदीको छोरालाई कोठामै बोलाएर खोप्न लगाएँ । दुइटा हान्दा पाँच हजारतिर खर्च भयो होला ।’ उनले आफूले ट्याटु अरुका लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि हानेको बताइन् ।‘नढाँटी भन्नुपर्दा सेक्सी देखिनलाई ट्याटु हानेकी हुँ, कहिलेकाहीँ छोटो लुगा लगाउँदा मेरो ट्याटु देखिन्छ त्यतिबेला मान्छेहरु मलाई घुरेर हेर्छन्,’ उनले सुनाइन् । फूलको बीचमा लभ लेखिएको ट्याटु खोपाएकी उनलाई अब कम्मरमा खोपाउने रहर रहेछ ।
शरीरका गोप्य भागतिर ट्याटु खोपाउँदा सबैभन्दा बढी दुख्ने गरेको ट्याटुकारहरु बताउँछन् । ‘प्रायः सबै गोप्य ठाउँतिर बढी दुख्ने गर्छ किनभने त्यहाँको छाला कमजोर हुन्छ । खासगरी छाती र स्तनमा धेरै दुख्ने गर्छ,’ आठ वर्षदेखि ट्याटु कलामा कार्यरत मोहन्स ट्याटुका श्री किसीले बताए ।
गोप्य भाग्यमा खोप्दाको अनुभव
शरीरका गोप्य र संवेदनशीलमा भागमा ट्याटु खोप्दा ट्याटुकारहरुलाई कस्तो अनुभूति हुँदा हो ? ‘सुरुसुरुमा नेचुरल फिलिङ आउँथ्यो,’ पोखराका ट्याटुकार विक्रमकुमारले भने, ‘तर काम गर्न थालेपछि ध्यान काममै मात्र हुन्छ । नेगेटिभ्ली सोचिँदैन । फेरि कसैको इच्छाविपरीत जाने कुरा पनि हुँदैन ।’ काठमाडौं, वसन्तपुरका केटिएम इन ट्याटुका ट्याटुकार निरज शाहीको विचार पनि विक्रमसँग मिल्दोजुल्दो नै थियो । ‘सुरुसुरुमा नर्भस भइन्छ,’ उनले भने, ‘तर मेसिन चल्न थालेपछि पूरै काममा फोकस भइन्छ । अरु केही मतलब हुन्न ।’
गोप्य खोपाउने मात्रै होइन गोप्य छेड्ने चलन पनि बढ्दो छ । ट्याटु हाउसहरुमा ट्याटुसँगै पियर्सिङ (औँठी छेड्ने) सुविधा पनि राखिएको हुन्छ । मोहन्स ट्याटुका पियरसियर अर्थात् म्यानेजर ओमप्रकाश गुरुङका अनुसार अचेल शरीरका जुनसुकै अंगमा ट्याटु हान्नु र पियर्सिङ गर्नु सामान्यजस्तै भइसक्यो । ‘अचेल अप्ठेरो मान्ने भन्ने नै हुन्न, फेरि पर्सनल ट्याटु र पियर्सिङका विषयमा कुरा गर्नै नचाहने धेरै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘युवतीहरुले गोप्य भागको कुरा गर्नुपर्दा निप्पल, नाइटो र यौनाङ्ग (क्लिट)मा छेड्ने गर्छन् । सायद पियर्सिङले उनीहरुलाई आनन्दित तुल्याउँदो हो ।’ पछिल्लो समय लिंगमा ‘सिलिकन बिट्स’ लगाएर यौनिक आनन्द लिने पुरुष पनि बढेको गुरुङको भनाइ थियो ।
स्तनमा ट्याटु खोप्ने कलाकार
केही नेपाली कलाकारले आफूलाई आकर्षित देखाउन शरीरको गोप्य भागमै ट्याटु खोपेका छन् । यी हुन्, छातीमा ट्याटु खोप्ने केही कलाकारहरु :
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले छातीको बाया“तिर ट्याटु खोपेकी छन् । विभिन्न पार्टी र कार्यक्रमतिर पुग्दा उनी हल्का ट्याटु देखिने पहिरन लगाएर पुगिरहेकी हुन्छिन् । उनले छातीमा नेपाली राष्ट्रिय फूल लालीगुरा“सको चित्र खोपाएकी छन् । उनको ट्याटुबारे सर्वत्र चर्चा हुने गरे पनि उनी केही प्रतिक्रिया दिने गर्दिनन् ।
सुष्मा कार्की, अभिनेत्री
अभिनेत्री सुष्मा कार्कीले पनि छातीमा ट्याटु खोपाएकी छन् । सुष्माले शान्तिको पिस, स्टार र गुलाबको फूललाई आकर्षक तरिकाले ट्याटुमा अंकित गरेकी छन् । पुरुरूहरुको पहिलो नजर केटीहरुको छातीमा जाने भएकाले आफूले छातीमै ट्याटु बनाएको उनले बताउँदै आइरहेकी छन् । उनी छातीमा खोपिएको ट्याटु घरिघरि देखाइरहन अप्ठेरो मान्दिनन् ।
अभिनेत्री शुभेच्छा थापाले पनि छातीमा नेपालको झण्डाको ट्याटु खोपेकी छन् । उनले दुई वटा झण्डा भएको ट्याटु खोपेकी छन् । आफूलाई हट एन्ड सेक्सी देखाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने उनले त्यसकै लागि छातिमा त्यस्तो ट्याटु खोपाएको बताइन्छ ।
जिया केसी, अभिनेत्री
फिल्म ‘एटिएम’मा दिएको बोल्ड सिनका कारण अभिनेत्री जिया केसी चर्चामा छाएकी थिइन् । अभिनेता भुवन केसीसँगको निकटताका कारण पनि चर्चामा आइरहने जियाको पनि देब्रे स्तनमाथि ट्याटु छ । फोटोसुटका क्रममा उनले ट्याटुलाई खुलेर एक्सपोज गर्ने गरेकी छन् ।
लक्ष्मी आचार्य, गायिका
पछिल्लो समय बोल्ड अन्तरवार्ता र फोटोसुटका कारण लोकदोहोरी गायिका लक्ष्मी आचार्य चर्चामा छिन् । उनले पनि स्तनमा ‘ऊँ’को ट्याटु खोपाएकी छन् । आफूलाई सेक्सी देखाउन र अरुको ध्यान खिँच्न यस्तो ट्याटु बनाएको बताउने उनी गायनभन्दा पनि हट फोटोसुट र युट्युब इन्टरभ्युका कारण चर्चामा छिन् ।
‘यौनिकता झल्काउन गोप्य ट्याटु’
ट्याटुले कुनै पनि चित्र, नाम अर्थात् भनाइलाई ‘सिम्बोलिकल्ली रिप्रिजेन्ट’ गरिरहेको हुन्छ । जस्तो कसैले आफूलाई फूलजस्तो महसुस गर्छ भने फूलको ट्याटु खोपिरहेको हुन्छ, कसैले इगल महसुस गर्छ भन्ने इगलकै खोप्छ ।
कतिपयलाई आफ्नो पहिचान बाहिर देखाउने चाह हुन्छ र उसले देखिने ठाउँमै पहिचान चित्रित हुनेगरी ट्याटु खोप्छ । कतिपयले फेसनकै रुपमा पनि ट्याटु खोपिरहेका हुन्छन् । सबैले खोपिरहेका छन्, मैले खोपिन भने पछाडि पर्छु भन्ने ठानेर खोपाउँछन् ।
शरीरका प्राइभेट पार्टमा ट्याटु खोपाउनेहरुको ध्येय पनि आफ्नो पहिचानलाई चित्रित गर्ने नै हो । कतिपयले स्तनमा ट्याटु खोप्छन् र आधा ट्याटु देखिने गरी ‘ओपन ड्रेस’ लगाउँछन् । गोप्य भागमा ट्याटु खोपेर देखाउन खोज्नेहरुको केस यौनिकतासँग जोडिएको हुनसक्छ । ‘मेरो यौनिकता यसरी रिजेम्बल’ गर्छु भन्ने भावना उसमा हुन सक्छ । कतिपयले सुन्दर फूलको ट्याटु स्तनमा खोपेर आफ्नो यौनिकता चित्रित गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्ने हो भने आफूतिर मान्छेको ध्यान खिच्न उनीहरु यसरी ट्याटुु खोपाइरहेका हुन्छन् ।
कतिपयले सिंगो शरीरभर ट्याटु खोपेको पनि देखेकी छु । मैले गरेको अध्ययनमा कतिपयलाई ट्याटुको लत भइसकेको हुँदोरहेछ । सियोले घोपिरहँदाको आवाजले उनीहरुलाई आनन्द महसुस गराउँदो रहेछ । खोपाइको एडिक्सन, आवाजको एडिक्सनमा परेपछि उनीहरु पटकपटक खोपाउने रहेछन् ।
मान्छे कुन अवस्था र परिस्थितिमा गुज्रिरहेको हुन्छ, उसले आफ्नो ट्याटुमार्फत त्यसैलाई चित्रित गर्न खोजिरहेको हुन्छ । आफ्नो माइन्ड जेमा आबद्ध छ, उसले ट्याटुमार्फत त्यसैलाई पोट्रे गरिरहेको हुन्छ । जस्तो उसले गाँजा, ड्रग्स खाइरा’छ भने त्यही खालको सिम्बोल खोपाउँछ । मैले २–४ जना केटालाई सोध्दा उनीहरु गाँजा खाने भएकाले शिवजीको ट्याटु बनाएको बताएका थिए ।
मैले दुई जना विदेशी केटी भेटेकी थिएँ । उनीहरु दुवैले एउटै सिम्बोल भएको ट्याटु शरीरको एकै भागमा खोपाएको पाएँ । उनीहरु बेस्ट फ्रेन्ड रहेछन् । घुम्न जाँदाको सुन्दर क्षण बिर्सन दिनुहुँदैन भनेर त्यसरी खोपाएका रहेछन् ताकि ट्याटु देख्नासाथ मित्रताको सम्झना होस् ।
ट्याटु डिजाइन पनि मान्छेको स्टेट अफ माइन्डमा निर्भर हुन्छ । समय÷परिस्थितिअनुसार मान्छेले छनोट गर्ने सिम्बोल परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । समय, उमेर अनुसार मान्छेको मेन्टल स्टेट फरक हुँदै गइरहेको हुन्छ । त्यो समयमा ठीक लागेको सिम्बोल अहिले नलाग्न सक्छ अनि हटाउन अर्थात् कभरअप गर्ने गरिन्छ ।
कतिपयले युवायुवतीले प्रेममा असुरक्षा फिल भएपछि एकअर्काका नाममा ट्याटु खोपाउने गरेको पनि पाइन्छ । केटीको एकदमै माया लाग्छ तर छोडेर जाला भन्ने डर भयो भने उसले आत्मविश्वास बिल्डअप गर्ने र बलियो माया देखाउन उसको नाममा ट्याटु नै खोपिदिन्छ ।
विशेषगरी महिलाहरुले शरीरको गोप्य भागमा ट्याटु खोपाउने गर्छन् । ‘सेक्सुअल्ली अट्र्याक्टिभ’ हुनलाई पनि त्यसरी खोपेको हुन सक्छ । आफूलाई ‘आइ एम भेरी सेक्सी’, ‘आइ एम नाइस एन्ड ब्युटीफुल’ भनेर चित्रण गर्न खोजिरहेको पनि हुनसक्छ ।
मैले १८ वर्षकी एक जना युवती भेटेकी थिएँ, जसले एकजना व्यक्तिको नाम ठूलो अक्षरमा नाडीमा खापेकी थिइन् । कारण सोध्दा जीवनमा ठूलो सहयोग पु¥याएको र मिल्ने भए शरीरभर फैलने गरी उसको नाम खोप्न मन भएको बताएकी थिइन् ।
इतिहास कोट्याउने हो भने ट्याटु खोपाउने परम्परा ४०–५० वर्षअघिदेखिकै यो । यो हाम्रो पुरानो संस्कृति पनि हो । मलाई त ट्याटु खोपाउने मान्छे त साहसी लाग्छ । यो एकचोटी खोपेपछि रहिरहन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै खोप्ने उनीहरुको आत्मविश्वास र साहसले लोभ्याउँछ ।
‘अभिभावकको डरले गोप्य भागमा खोपाउँछन्’
ट्याटु अहिले कतिपयलाई इन्जोयमेन्ट, कतिपयलाई फेसनको माध्यम बनिरहेको छ भने कतिपय आफूलाई फरक देखाउने उपाय ठान्छन् । विदेशी शैली कपी गर्न खोज्नेहरु पनि उस्तै छन् । विशेषगरी अभिभावकको अनुमति नपाउने युवायुवतीले शरीरको गोप्य भागमा ट्याटु खोपाउने गर्छन् । कतिपयलाई आफ्नो गलफ्रेन्ड÷ब्वाइफ्रेन्डको नाम देखिने गरी लेख्न मन लाग्छ तर अभिभावकको डरले गोप्य भागमा लेखाउँछन् । गोप्य भागमा ट्याटु खोपाउनेहरु खुलेर आउन चाहँदैनन् । मेरो पर्सनल ट्याटु हो, किन अरुलाई देखाउने ? भन्छन् अनि फोटो खिचाउन मान्दैनन् । पछिल्लो समय धेरैजसोले प्रेम अभिव्यक्त गर्ने माध्यमका रुपमा ट्याटु खोपाइरहेका छन् ।
‘गोप्य भागमा खोप्दा बढी दुख्छ’
छाला जहाँ–जहाँ हुन्छ त्यहाँ–त्यहाँ ट्याटु खोप्न मिल्छ । पछिल्लो समय महिला–पुरुष दुवै बराबर रुपमा खोपाउन थालेका छन् । अझ गोटाका हिसाबले त स–सानो भए पनि महिलाकै बढी होला । गोप्य ठाउँमा खोपाउनेहरुको कारण पनि गोप्य नै हुन्छ । किन ट्याटु बनाउनुभएको भनेर हामीले कसैलाई सोध्न मिल्दैन । त्यस्तै गोप्य ठाउँमा ट्याटु खोप्दा सबैभन्दा बढी दुख्ने गर्छ किनभने गोप्य भागको छाला पनि कमजोर हुन्छ । यसरी ट्याटु खोपाउने जस्तोसुकै पेसाको मान्छे पनि आइरहेका हुन्छ । कोही अलिकति देखिने गरी मात्र पनि खोप्छन् । यो ट्याटु भनेको कसैलाई देखाउने, कसैलाई लुकाउने चिज होला तर मेरा लागि आर्ट हो । यद्यपि मैले आफैँचाहिँ अहिलेसम्म ट्याटु खोपेको छैन । म आफू खोप्नमा भन्दा पनि अरुलाई खोप्न रुचाउँछु ।
‘छोटो पहिरन लगाउँदा ट्याटु घुरेर हेर्छन्’
मैले ढाडको तल र माथि गरी दुई ठाउँ ट्याटु खोपेकी छु । मसँगै डान्सबारमा काम गर्ने दिदीले छोटो ड्रेस लगाएर नाच्दा उहाँको ट्याटुले सबैको ध्यान खिँच्थ्यो । ‘वाउ’ भन्ने हुन्थ्यो । त्यसैले मैले पनि खोपेँ । पाँच महिना भयो खोपेको । एउटा क्राउनको र अर्को फूलको बीचमा लभ लेखिएको ट्याटु खोपेको छु । मैले एक जना दिदीको छोरालाई घरमै बोलाएर खोपाएको हुँ । ओपन ड्रेस लगाउँदा मात्र मेरो ट्याटु देखिन्छ । मैले अरुका लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि ट्याटु हानेको हो । खासमा भन्नु पर्दा सेक्सी देखिनलाई ट्याटु खोपेकी हुँ । छोटा पहिरन लगाएका बेला मेरो ट्याटु घुरेर हेर्छन् ।
‘हल्का देखियोस्, कहिलेकाँही देखियोस्’
मैले शरीरको तीन ठाउँ ट्याटु खोपेको छु । कुम, हिप र खुट्टामा । अब छातीमुनि खोप्न मन छ । ट्याटु म सधैँ देखाउँदिन । कहिलेकाहीँ देखियो भने मात्र भ्यालु हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यो पनि हल्का देखियोस् अनि मान्छेलाई कौतहुलता होस् भन्ने लाग्छ । यो केटीको ट्याटु रहेछ, यस्तोमा के रहेछ भनेर कौतहुल होस् भन्ने लाग्छ । मैले हिपमा पाठेघरको ट्याटु बनाएको छु । पाठेघरमार्फत बच्चा जन्मिन्छ र यसको ठूलो अर्थ हुन्छ भनेर त्यसको ट्याटु बनाएको हुँ । त्यस्तै कुममा जापानी रोज र खुट्टामा मैले आफ्नै डान्स सेन्टरको लोगो खोपाएकी छु । मैले ट्याटु खोप्नुको उद्देश्य मान्छेको ध्यान आफूतिर तान्नलाई नै हो ।
ठमेलमा वेटर भएर सेकुवा बेच्दै, वल्र्ड कप देखाउँदै महावीर पुन	Sunday, June 17th, 2018
यसकारण भयो धमिलो वर्षा	Saturday, June 16th, 2018